Zvemukati Ongororo: End-to-End eCommerce Management yeBrands neVatengesi | Martech Zone
Mugovera, Mbudzi 18, 2017 China, May 7, 2020 Douglas Karr
Vazhinji-chiteshi vatengesi vanoona kukosha kwezvakanaka zvigadzirwa zvemukati, asi nemakumi ezviuru emapeji echigadzirwa akawedzerwa kune yavo webhusaiti zuva rega rega nemazana evatengesi vakasiyana, zvinenge zvisingaite kuongorora zvese izvo. Padivi remafiripi, mabhureki anowanzo kuvetera zvinhu zvakawandisa zvekutanga, zvichiita kuti zviome kwavari kuona kuti rondedzero yega yega inoramba iri padanho.
Nyaya iripo ndeyekuti vatengesi nemabhureki vari kazhinji kuyedza kugadzirisa dambudziko rehurombo hwechigadzirwa zvemukati nekushandisa imwechete-poindi mhinduro. Vanogona kunge vaine analytics tekinoroji iyo inopa kujeka mumatambudziko nezvigadzirwa zvinyorwa, asi ivo havapi maturusi ekugadzirisa izvo zvemukati nyaya zvinoenderana. Kune rimwe divi, vamwe vatengesi nemabhureki vanogona kunge vaine zvemukati syndicator izvo zvine maturusi ekugadzirisa nekugadzirisa zvigadzirwa zvemukati, asi hazviratidze chaizvo kuti ndeupi ruzivo runoda kukwidziridzwa uye maitiro ekugadzirisa.
Vatengesi uye mabhenji avanoshanda nawo anoda zvese analytics uye zvigadzirwa zvemukati manejimendi kupa vatengi ruzivo rwavanoda kuti vanyatso tsvagiridza nekutenga zvigadzirwa online. Zvemukati Analytics ndiyo yekutanga uye yekupedzisira-kumagumo eCommerce mhinduro inosanganisa analytics, zvemukati manejimendi uye kuzivisa zvese mune imwechete chikuva, ichipa kukosha kune vese vatengesi nevatengesi vavo.
Zvemukati Zvekuongorora zveVatengesi: VendorSCOR ™
VendorSCOR ™ chishandiso chinopa vatengesi simba kuti vachengetedze vatengesi vavo vazvidavirire pane zvemukati zvechigadzirwa zvavanoisa pane yavo saiti. Yekutanga uye yega mhinduro yerudzi rwayo, VendorSCOR inobvumidza vatengesi kuratidza vatengesi vavo nzvimbo dzipi dzinoda kutariswa nekugadziriswa nekukasira, kugadziridza saiti mhando uye kukurudzira kutaurirana kwakazara nechero network yavo yemhando. Zvemhando kunyanya, VendorSCOR inovabatsira kuti vaone kuti mapeji avo anoenderana nezvose mutengesi uye zvinodiwa nevatengi, zvinowedzera kuvimbika kwevatengi uye mitengo yekutendeuka.
NaVendorSCOR, vatengesi vanogona kutumira vatengesi mamakadhi pahunhu hwechimwe nechimwe chezvigadzirwa zvavo pasvondo, vachivabatsira kuve nechokwadi chekuti zvemukati zvinogara zvichizadzisa zvirevo zvevatengesi uye zvakagadziridzwa zvakanyanya kune vatengi. Nekushandisa kuburitsa dhata padandemutande, chishandiso chinokamba saiti kuti ione maburi, zvikanganiso uye kusiiwa mune zvirimo, senge mifananidzo isipo, tsananguro isina kugadzirwa yechigadzirwa, kushomeka kwematanho uye kuongororwa, uye zvimwe zvinhu zvinokanganisa traffic uye kutendeuka. Icho chishandiso chinobva chabatsira vatengesi kuisa pamberi pekugadzirisa uye nekupa inoitika inoitika uye nhanho dzekuvandudza zvirimo.
Kana vatengesi vangonzwisisa nyaya nezvirimo zvavo nemikana yekuvandudzwa, VendorSCOR inobatsira mabhenji kuita zvigadziriso zvinoenderana. Zvemukati Analytics 'yakasimba PIM / DAM chishandiso inobvumidza mabhenji kuchengeta uye kugadzirisa zvigadzirwa zvemukati, asi zvakare ona kuti vanganyatso gadzira sei chigadzirwa chimwe nechimwe chekutsvaga. Kubva ipapo, mabrands anogona kukurumidza kuburitsa yavo yezvigadzirwa kune avo vese nzira dzekutengesa mune akakodzera fomati, kuve nechokwadi kusagadzikana uye kurongeka pamapuratifomu.
Nekupa vatengesi maturusi avanoda kuona kuti saiti yavo ine zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, VendorSCOR pakupedzisira inobvumidza vatengesi nevatengesi kuti vashande pamwechete kutyaira kutengesa uye kununura zvirinani zvevatengi.
Target, mumwe wevatengesi vakuru vekutanga kubatana neChinyorwa Chekuongorora paVendorSCOR makadhi, anozotarisa pakushandisa chishandiso kugadzirisa pamberi pemwaka wezororo wa2017. Vatengesi, seTarget, vari kutendeukira kuVendorSCOR kuti vabatsire kudzikisira ruzivo rwekutenga kune avo vane chekuita navo mukati, zvigadzirwa zvavo uye, zvinonyanya kukosha, vatengi vavo.
Kubatanidza zvese analytics uye zvemukati manejimendi ndiyo kiyi yekupona uye kukunda mune yanhasi-inokwikwidza nzvimbo yekutengesa. Kana vatengesi vasingape vatengi ruzivo rwavanoda kuti vatenge, ivo vanongo enda kune iyo inoda. VendorSCOR haisi kungoongorora dambudziko chete, asi zvakare rinopa vatengesi uye mabhureki avanobata pamwe nawo nematanho akagadziriswa uye anoshanda-ekugadzirisa ekugadzirisa pamwe chete. Kenji Gjovig, VP weUkudyidzana uye Kuvandudza Bhizinesi paChinyorwa Chekuongorora
Zvemukati Zvekuongorora zveMakambani: Chekutanga Mover Chinyorwa Chishandiso cheBrands
Mhando dzinoziva vatengesi vanogadzirisa mitengo pasina chiziviso chidiki, asi pasina software njere kuti ifanane nekumhanya kwevatengesi maalgorithms, ivo havakwanise kuona kuti ndeupi mutengesi wepamhepo akatamisa mutengo kutanga uye kuti wakachinja zvakadii.
Zvemukati Ongororo 'Yekutanga Mover Ripoti rinotarisa mitengo yezvakafanana zvigadzirwa munzvimbo dzakawanda dzevatengesi' munguva chaiyo-nguva, ichizivisa uye ichitaura kuti kangani vatengesi vanochinja mitengo yavo uye ndiani akatanga kufamba. Sekuwedzera musono kune iripo MAP uye MSRP mitengo yekutyora mishumo, First Mover Report inobatsira mabhenefiti kuona uye kuteedzera mikana yekuvandudza margin uye nekuona mitengo chaiyo pamatanho ese epamhepo.
Brand Case Chidzidzo: Mattel
Asati abatana neChinyorwa Chekuongorora, Mattel akange atove neano tarisisa pane omnichannel manejimendi, asi anga asina maturusi ekuenderera pamwe nekuwedzera kudzvinyirira kwevatengi kwezviitiko zvepamhepo.
Kuvandudza kutengesa uye kuchengetedza mhando yepamhepo pamhepo, Mattel akatendeukira kuChinyorwa Chekuongorora kuti vagadzire matatu-mativi emnichannel zano kubhizimusi ravo reCommerce, raisanganisira:
Kuvandudza zvigadzirwa zvemukati nekugadzirisa mazita uye tsananguro yechigadzirwa, pamwe nekuwedzera ekutsvaga-akagadziridzwa mazwi akakosha, mapikicha uye mavhidhiyo
Kuderedza kunze-kwe-stock-mitengo nekuve neicho chaicho-nguva kuoneka mukati kana zvigadzirwa zvabuda kunze kwemasheya
Kubata mari kune yechitatu-bato rekutengesa nzira nekushandisa nzira dzekupupura uye analytics kubatsira kunzwisisa maitiro ekuwedzera mikana yekutenga
Nekunongedzera aya matatu marwadzo ehunhu, Zvemukati Zvekuongorora zvakakwanisa kuvandudza ruzivo rwaMatel uye mutsetse wepasi. Matanho akasarudzika aisanganisira:
Yakagadzirisa zvirimo zveayo epamusoro 545 SKUs, kusvika padanho ravakawana Zvemukati Zvekuongorora 'Zvehutano Hutano Score ye100% pane chese chinhu
Yakadzikira kunze-kwe-stock mareti ne 62% pakati paNove-Dec 2016
Yakavandudzwa mu-stock mitengo yeakakosha madhiraivha ne21%
Yakagadzira iyo "Mattel Shop," yechitatu-bato yekutengesa chiteshi kuchengetedza bhokisi rekutenga apo Mattel akange asipo, nekudaro achichengetedza mhando yemhando uye kutonga pamusoro pechiitiko chevatengi.
Paunenge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchiita - Erika Zubriski, Mutevedzeri weMutengesi, Mattel
Mamwe mabhureki uye vatengesi vanoshandisa Zvemukati Zvekuongorora inosanganisira Walmart, P&G, Samsung, Revhi, L'Oreal uye nezvimwe.
Tags: zvemukati zvemukatiContent Marketingdhamuecommerce zvemukatiKenji GjovigL'OrealRevhimattelP&Gpimumapeji emhizhazvekutengesa zvigadzirwaSamsungskuchinangwamutengesi zvibodzwavendorscorWalmart
Mbudzi 27, 2017 na11: 49 PM
Munyika yekushambadzira yedhijitari kune hwakawanda hwakawanda hwekutengesa tekinoroji maturusi ayo anotibatsira kuti tikure mberi. Kushambadzira tekinoroji maturusi anoita kuti zvinhu zvive nyore. Zvemukati tine Buzzsumo, grammarly nezvimwe zvishandiso. Zvekugadzira isu tine Lumen 5, stencil nezvimwe zvishandiso. ZveHTML tine litmus, inkbrush. Zvekutengesa email tine Mailchimp. Zve Seo tine Href, rankwatch, Keyword Planner nezvimwe zveku analytics tine Google analytics. Zvemagariro enhau isu tine Socio advocacy, zvishoma, Zvemanejimendi manejimendi isu tinononoka, google drive nezvimwe zvishandiso. Zvese izvi zvishandiso zvinoita basa rakakosha mudhijitari kushambadzira pasi.